पाथिभारा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् असार १० गते बिहिबार (जुन २४)को राशिफल – Complete Nepali News Portal
पाथिभारा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् असार १० गते बिहिबार (जुन २४)को राशिफल
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) र्को योग रहेको हुनाले लगानिमा ध्यान दिनु होला । मान्य जनको साथ सहयोग पुर्ण रुपमा प्राप्त नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । साधारण वाद विवादको चपेटामा फस्ने समय रहेकोले सजग रहनुहोला । मध्यान पश्चात मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको प्रारम्भ हुनेछ ।